प्रियंका कार्कीले सार्वजनिक गरिन मुस्कान सहितका यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(२२ तस्बिर सहित) – News Kalika
काठमाडौं, प्रियंका कार्कीका २० हसिला तस्विर। नायिका प्रियंका कार्कि मुस्कानसहितकाे फाेटाे शेयर गरेकिछन । सरकारले देशभर गरेको लक,डा उनका कारण सेलिब्रेटीको जीवन घरमै सीमित भएको छ । नायिका प्रियंका कार्की पनि यतिबेला फुर्सदमा छिन् ।फुसर्दमा हुँदा कलाकारले आफ्नो शूटिङको समय सामाजिक सञ्जालमार्फत शेयर गरिरहेका छन् ।
दिनमा १८ घण्टासम्म व्यस्त हुने प्रियंका पछिल्लो समय भने फुर्सदिलो बनेकी छिन् ।गतवर्ष फागुनमा आयुष्मान देशराज जोशीसँग बिहे गरेकी प्रियंका बिहेका कारण उक्त महिना चर्चामा रहिन् । गतवर्ष उनले अभिनय गरेका फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात पार्न सकेनन् । यद्यपि प्रियंकाको चर्चा भने भयो ।प्रियंका इन्स्टाग्राममा पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्छिन् ।
आफ्नो सुन्दर मुस्कानले उनले फ्यानको मन जित्छिन् । प्रियंकाले पछिल्लो समय मुस्कुराएका तस्वीरहरु शेयर गर्ने क्रम बढेको छ । हेरौं उनले शेयर गरेका केही तस्वीर
यो पनि पढ्नुस अन्टि भएर हराउन्न नायिका रेखाथापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकि एक चर्चित अभिनेत्री र तथा र्निमात्री हुन् । सन् १९९९ मिस नेपालमा सहभागी भएर उनी उत्कृष्ट दस मा पर्न सफल भएकी थिइन् । २ वर्ष पछि उनले छबी राज ओझाको चलचित्र हिरोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
बरु उनीहरूले पाएको संस्कारमा चिन्तित भइन्। यदि समाज र परिवारले राम्रो संस्कार बालबालिकालाई दिन नसक्नुमा उनको दुखाइ छ। भन्छिन्,जब हामी जन्मन्छौं। अनि जे संस्कार भयो त्यही सिक्छौं। उनीहरूलाई म बुढी भनेको कसरी थाहा भयो। त्यो त उसको परिवारले भनेको हुनुपर्छ। परिवारले दिएको संस्कारमा समस्याहोनि यो।
Previous Postज्योती मगर नामै काफी छ, भन्दै सार्वजनिक गरिन यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(१७ तस्बिर सहित)
Next Postनायिका सुरविना कार्की यस्तो अवतार मा हेर्नुहोस् मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर १५ फोटोमा
आमाछोरीको ‘हिट’ जोडी, टिकटकदेखि म्युजिक भिडियो सम्म हिट
kalika 1:01 pm
हैट ! दुनियाँ नै मोहित बनाउने रैछ् गाँथे…फिगर त,दुनियाँ मोहित बनाउने फिगर भएकी युबती, जस्को शरीर देखेर संसार चकित ! हेर्नुहोस तस्विर सहित
kalika 6:08 am
लोकप्रिय अभिनेत्री साम्राज्ञी यस्तो फरक लुक्समा, मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…..(३० तस्बिर सहित)
kalika 10:14 am
चर्चित नायिका स्वस्तिमासंग दुरुस्तै अनुहार मिल्दा टिकटकमा भाईरल बन्दै स्मृति
kalika 11:59 am